Izinhlelo zempelasonto nezingane nomndeni | Izindaba Zokuhamba
Kuhlelwa impelasonto nezingane
USusana Garcia | | General, Ukuhamba nezingane
Ukuhlela impelasonto nezingane Kungaba nzima, ikakhulukazi ngoba kufanele sithole indawo elungele wonke umuntu. Abancane kufanele babungazwe nabadala futhi, ngomthamo wokuzijabulisa nokuphumula kwabo bobabili. Namuhla ungenza izinhlelo eziningi nezingane ezenzelwe impelasonto kuphela, ngoba sinamathuba amaningi nolwazi ngewebhu.
I-Los ngezimpelasonto nezingane Kufanele bajabulise wonke umndeni. Wonke umuntu kumele enze izinto ndawonye, ​​ukuze kungasali muntu ngaphandle. Kungakho kufanele ubheke okwenziwayo nemisebenzi ehambelana nempilo yomndeni.
1 Umzila olula wokuhamba izintaba
2 Ipikiniki ensimini
3 Indlu yasemakhaya yawo wonke umuntu
4 Ukugibela ibhayisikili
5 Usuku lokukanisa amatende
6 Vakashela umnyuziyamu
7 Yazi idolobha lakho
8 Thola ukunambitheka okusha
Umzila olula wokuhamba izintaba
Enye yezinto esingayenza nabancane ngezimpelasonto ukuhlola umzila wokuhamba ngezintaba ngobunzima obuphansi. Ngokuya ngeminyaka yezingane nokuma kwazo ngokomzimba, singajabulela eminye imizila enamakhilomitha ambalwa lapho bezobungazwa khona, basebenzise amandla futhi bathole imvelo. Ukugcwalisa ngezimpelasonto ngeminye yale mizila kungumbono omuhle, njengoba kuyi- ukuzijabulisa okunempilo kuwo wonke umndeni futhi-ke kuyajabulisa kakhulu. Uma singenasiqiniseko sokuthi kuyindlela efinyeleleka yini yezingane, singakwenza njalo kuqala, ngoba kwesinye isikhathi zingaba zinde kakhulu noma zibe nzima ngenxa yendawo.
Lo ngomunye umqondo omuhle wokuchitha usuku ungekho ekhaya wenze okuhlukile. Singenza i- ipikinikini yomndeni emnandi emaphandleni. Emadolobheni amaningi kunezingadi ezinkulu ezisivumela ukuthi senze izinto ezinjengalezi ngaphandle kokwenza uhambo olude. Kumele uhlele ukudla, engeza indwangu enkulu yetafula bese ukunambitha ukudla okumnandi, okuhlala kungcono ngaphandle. Ukuchitha intambama singaletha imidlalo ethile yebhodi ukuze wonke umndeni ubambe iqhaza.
Indlu yasemakhaya yawo wonke umuntu
Jabulela i- ngempelasonto endlini esemaphandleni Ayenzelwe imibhangqwana noma amaqembu wabangane kuphela. Kunezindlu zasemakhaya okuyizinto ezinhle ongakhetha kuzo wonke umndeni. Kuhle ukukhetha indlu lapho ngokwesibonelo banenkundla yokudlala, noma ichibi lokubhukuda uma izingane zikwazi ukubhukuda. Ngale ndlela bazoba mnandi kakhulu. Ezindaweni ezizungeze izindlu zasemakhaya kuvame ukuba nezikhala ezinhle zemvelo, ngakho-ke ukuthatha umzila, ngezinyawo noma ngebhayisikili, kungaba enye indlela.
hacer uhlobo oluthile lomdlalo ngempelasonto iyimiqemane emndenini wonke. Kwesinye isikhathi singahamba sihambe izintaba abanye bagibele amabhayisikili amancane. Kunezindawo eziphephile zokwenza le mizila ngebhayisikili, kepha kufanele ngaso sonke isikhathi sibheke imizila efinyeleleka futhi elula kuwo wonke umuntu. Kungumsebenzi onzima kakhulu, kepha kufanelekile uma sinezindawo lapho sonke singahamba ndawonye ngebhayisikili.
Usuku lokukanisa amatende
Omunye umsebenzi ongaheha izingane ukwenza usuku lwamatende ndawonye. Lokhu kungabasiza bafunde izinto ezimbalwa, njenge usethe itende futhi uzwane kangcono emvelweni. Kunezindawo zokukhempa futhi ungahamba futhi ukanise ngasendle usuku lonke, yize kunzima kakhulu. Ukuhamba nomndeni wonke, kungcono ukufuna izindawo ezifana nezindawo zokukhempa ukuze ukwazi ukuthola izinsizakalo ezithile.
Futhi zingenziwa ukuvakashelwa kwamasiko nabancaneNjengoba zivulekele noma ikuphi ukufunda, zifana nezipanji. Uma sibayisa e-museum, ngokuqinisekile bazoba nombono ohlukile wemisebenzi. Singabatshela ngabo noma sibayeke bahumushe ubuciko ngendlela yabo. Kunoma ikuphi, kuhlale kuyisinqumo esihle ukuvakashela umnyuziyamu ngempelasonto. Kwabaningi babo, imisebenzi ihlelwe ngezingane noma imihlahlandlela yokuzifundisa ubuciko ngombono ofana nowengane.
Yazi idolobha lakho
Impela ikhona emakhoneni edolobheni ezingakatholakali, noma izindawo ezintsha kanye nemisebenzi esingakabhaliseli yona. Edolobheni kunokuningi okumele sikubone, ngakho-ke singenza njalo uhlu lokuvakashelwa ukuze sikuthole nabancane, kanye nemisebenzi engenziwa ngesikhathi ngasinye sonyaka edolobheni ukuze ungaphuthelwa yilutho. Kufanele ubheke kwimihlahlandlela yokuzilibazisa emadolobheni ukuze ubone ukuthi yini engalungela wonke umndeni.
Thola ukunambitheka okusha
Uma wonke umuntu emndenini esithanda zama ukunambitheka okushaKungumqondo omuhle ukuchitha impelasonto ukuthola izindawo ezintsha ukuzama ukudla okwehlukile. Abancane ngokuqinisekile bazokuthanda ukudla ngesiJapane ngezinti, noma ukuthola ukudla kwase-Arab. Lokhu kubasiza ukuthi bavuleke kakhulu ngokudla nangokunambitheka, ukuzama ukuzwa izinto ezintsha nezingafani.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Kuhlelwa impelasonto nezingane